ne-Demerit Point System
Ukuqwqwshwa komshayeli ngamunye
Ukuqonda umthetho we-AARTO
Imiphumela yokungathobeli imithetho
Uhlelo Iwephoyinti le-Demerit
Ungawaqapha kanjani amaphuzu akho
Abiwa kanjani amphuzu
Ungawagvwalisa kanjani amafomu e-AARTO
Umthetho Wokuchibiyela we-AARTO kanye nesistimu yephoyinti lokuhlehla sekusondele futhi kubangela usongo olukhulu!
Ingabe ubaqeqeshe Abashayeli bakho?
Umthetho, ozoqala ukusebenza mhla lu1 kuNtulikazi wezi-2021, ngohlelo lwayo olusha Iwamaphuzu aphumayo, Uzoba nothelela omkhulu ezinkampanini uma abashayeli nabasebenzi bezokuphatha bengaqeqeshwanga ngokomsebenzi.
Lokhu kuhlanganisa ukubajwayelanisa nomtheto, lapho amaphuzu enikezwa futhi lapho amalayisense okushayela emiswa, ukuqonda amafomu e-AARTO, kanjani futhi kuphi ukuqapha amaphuzu afgafaneleki kanye nemiphumela yokungathobeli.
:Lesi sifundo siyisixazululo esiphelele esinokuphazamiseka okuncane kodwa nomthelela omkhulu.
Isifundo siyashesha ukuqedwa, sigcwelw lonke ulwazi oludingekayo olunamaphepha emibuzo asezingeni eliphezulu nesitifiketi sokuphothula njengobufakazi bokuqeqeshwa nokuhambisana.
Kule mojula sighlanganisa amazwibela e-AARTO, ukuthi yasayinwa nini yaba umthetho kanye nesizathu sokuthi kungani yaqalwa.
Inqubo ephelele yokwahlulela
Abashayeli bakho bading ukuqonda izinketho zokuzikhethela abanazo.
Inqubo Ye-AARTO yamaphuzu Okungafaneleki
Kule mojula sihlanganisa lapho ama-demerit points abiwa, ukuthi ancishiswa kanjani nokuthi ungawaqapha kanjani amaphuzu.
Sichaza amafomu we-AARTO
Uma ifomu le-AARTO lingagcwaliswanga ngendlela efanele lingase libambezele inqubo yakho futhi libangele ukubambezeleka okungadingekile kubasebenzi bakho bokuphatha.
Indlela Ehamba Ngezigaba
i-AARTO izosethenziswa ngendlela enezigaba. Siphinde sibheke ingosi ye-AARTO nezinhlelo zokusebenza zeselula nokuthi ungazisebenzisa kanjani.
i-AARTO izojezisa amabhizinisi kanye nabaqhubi bemikhumbi abanecala lamacala omgwaqo ngokubeka amaphuzu angafaneleki. Uma sekweqiwe unkhawulo wamaphuzu, ilayisense yokushayela imiswa izinyanga ezintathu bese kuthi ngemuva kwamakhovisi amathathu iyesulwe. Lokhu kuzoba nomthelela omkhulu ezinkampanini ezinemikhumbi noma abasebenzi abathembele ezincwadini zabo zokushayela ukufeza imisebenzi yabo. Izimoto zenkampani yakho nazo ngeke zikhavwe kunoma yiziphi izicelo zomshwalense uma abashaveli bakho bewamisile amalayisensi.
Lungiselela namuhla futhi uqiniseke ukuthi unawo wonke amasistimu nezingubomgomo zakho endaweni.
Lesi sifundo siyithuluzi elihle lezinkampani ezinabashayeli. Uma abashayeli bakho beqonda imithelela nemiphumela yokungathobeli imithetho, kuzoba lula ukusebenzisa izinqubomgomo nezinqubo zakho ezibuyekeziwe.